DHALADA ＆BAAQO, INC.
Weelasha caaga ah
Xidhmada Ball Rullaluud
Tubooyinka Caagga ah
Caagadaha Caagga ah
Weelasha Sare ee Hinge
Tuubada gel siilka
Koofiyadaha Iyo Xiritaanka
Bambooyin iyo Sprayers
Mawduuc joogto ah
Talo Foosha dheer
Misc.Waxaad ka heli kartaa
Adeegga & Khayraadka
Daahfurka tijaabada dhalada iyo badeecada
Waa maxay caaryada maaddada qabow oo aan lahayn orodyahan
Guud ahaan, marka la isku durayo wax -ka -beddelidda, alaabta la shubay oo ka soo biloowday galay caaryada, iyada oo loo marayo kanaalka guud, kanaalka leexashada iyo iridda godka, iyo caagagga qaboojinta caagga ah, adkaynta qaboojinta, iyo alaabta suunka leh. Sidaa darteed, markaad gasho secon -ka ...
Dhalooyinka shaambada timaha fudud oo ku habboon ayaa caan ah
Sababtoo ah naqshadaynta dhalada biyaha shaambada waa mid aan caqli -gal ahayn, keen dhibaato yar oo aan loo baahnayn oo soo saarta habka adeegsiga, waa in in ka badan ama ka yar ay la kulmeen dhowr. Badeecadda dhalada shaambada ee caamka ah ISTICMAALO jirka dhalada elliptical iyo PE opaque si loogu ballanqaado derin ...
Shirkadaha dhalada sunta cayayaanka ayaa sidoo kale u baahan inay la qabsadaan naqshadda cusub
Geedi -socodka casriyeynta beeraha ayaa ku jira horumar aan kala joogsi lahayn, suuqa beeraha ee dalkeenna ayaa sidoo kale u dhaqaaqa dhinaca baaxadda leh, farsameynta. Markii ay soo galeen xirfadleyda beeraha, dadka isticmaala dhalada sunta cayayaanka ayaa bilaabay inay isbedelaan. Sunta cayayaanka ayaa lagama maarmaan u ah wax soo saarka beeraha. Alt ...
Khataraha warshadaha dhalada saliidda saytuunka waxay u baahan yihiin taxaddar iyo ka hortag
Waagii hore, saliidda saytuunka, oo ah saliid la cuni karo oo aad u sarraysa, ayaa macmal ahaan qiimaheedu aad u sarreeyey, oo ay weheliso aqoon la’aanta guud ee ku saabsan saliidda saytuunka. Sidaa darteed, dad badan oo ka ganacsada saliidda saytuunka ayaa dibadda ka soo dejiya saliid saytuun oo qiimahoodu hooseeyo waxayna saliidda saytuunka ku iibsadaan dhalooyin si ay macaash badan uga helaan. Dhowrkii la soo dhaafay ...
Faa'iidooyinka qurxinta leh tuubada vermicelli
Dhawaan, qurxiyo badan ayaa caan noqday oo “ul” waxay leeyihiin magac aad moodo. Suuqa qurxinta hadda, dhib malahan hoosta casaan, dhabanku waa casaan ama hooskii isha, wuxuu rabaa inuu ku muuqdo foomka “ul” kaliya, wuxuu kor u qaadi karaa kor u kaca! Marka maxay tahay sababta vermicelli strip ay ka samaysan tahay awood ...
Isbeddellada horumarinta dhalooyinka caagga ah ee dawooyinka
Iyada oo ay weheliso dhalada caagga ah ee daawada oo aan joogsanayn ayaa u muuqata su'aasha ku jirta mihnadda xirxirida daawada. Samee dhalooyinka caagga ah ee caafimaadka Iyada oo loo marayo dib -u -habayn farsamo oo joogto ah iyo horumar, dhalooyinka caagga ah ee caafimaad ayaa ugu dambayntii horumar la taaban karo ka sameeyay baakadaha ...
Shirkadda Kechang waxay falanqaynaysaa isbeddelka horumarka warshadaha tuubada gel
Taizhou Kechang Warshadaha Caagga ah Co., Ltd. waa soo -saare xirfadle ah oo ka samaysan alaab caag ah, oo ay ku jiraan tuubooyinka jel -ka dumarka, in ka badan toban sano oo waayo -aragnimo wax -soo -saar ah, raadinta heer sare, tayo aad u fiican iyo tayo ayaa ah ujeeddada adeeggayaga. Raacitaanka ...
Farqiga u dhexeeya dhalooyin caag ah oo ka samaysan waxyaabo kala duwan
Waxaan la macaamilnaa badeecooyinka caagga ah maalin walba, sida bacaha wax lagu qaado, baaldiyo caag ah oo lagu tuuro qashinka, dhalooyinka caagga ah ee biyaha macdanta la cabbo iwm. Ma taqaan macnaha maaddada caagga ah ee PET. PP. PE? PET ...
Kor u kaca warshadaha balaastigga
Horumarinta sanadihii ugu dambeeyay, warshadaha balaastigga ee Shiinaha ayaa kor u kacayay waxayna noqotay bedel baakado badan oo dibadda ah. Baakado badan oo dibadda ah ayaa laga beddelay dhalooyinkii hore ee dhalooyinka iyo dhalooyinka dhoobada ah oo loo beddelay baakadaha dhalada caagga ah. Dhalooyinka caaga ah ayaa sidoo kale soo gala ...
Isbeddellada horumarinta dhalooyinka caagga ah
Maadaama dhalooyinka dhalooyinka ay ka sii muuqdaan dhibaatooyinka warshadaha baakadaha. Haa, dhalooyin caag ah ayaa soo qabanaya. Dhalooyinka caagga ah iyada oo loo marayo dib -u -habayn farsamo oo joogto ah iyo horumar, ugu dambayntii dhalooyinka caagga ah ka samee warshadaha baakadaha ayaa sameeyay horumar la taaban karo. Sida laga soo xigtay khabiirada warshadaha, ...
Alaabooyinka daryeelka caafimaadka ee caqliga leh dhalooyinka caagga ah waxay noqon doonaan isbeddellada horumarka mustaqbalka ee dhalooyinka caafimaadka
Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo suuqa baakadaha dhalada caaggu uu leeyahay awood aad u weyn, haddana dhibaatooyinka ka jira dhalooyinka caagga ah ee alaabooyinka daryeelka caafimaadka lama iska indho tiri karo. Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha dhalada caagga ah ee alaabta daryeelka caafimaadku waxay horumarisay oo si joogto ah u koray ...
Naqshad cusub ayaa gashay shirkadda dhalada cayayaanka
Suuqa beeraha ee Shiinaha ayaa u socda dhinaca cabbirka iyo farsameynta, sidoo kale hannaanka casriyeynta beeraha ayaa isna hormaraya. Markii ay soo galeen xirfadleyda beeraha, dadka isticmaala dhalada sunta cayayaanka ayaa bilaabay inay isbedelaan. Sunta cayayaanka lagama maarmaan u ah wax soo saarka beeraha ...
Beerta warshadaha ee baakadaha dawooyinka, Magaalada Lupu, Gobolka Yuhuan, Gobolka Zhejiang, Shiinaha